Publié juillet 28, 2018 par Book News
Saika ho isan-kerinandro dia misy herisetra miseho foana amin’ireo mpiasa eny amin’ireny faritra voaaro ireny. Vao ny alakamisy teo no nisy mpiasa iray voatifitra tany Bemaraha.
Mijaly amin’ny tsy fandriampahalemana ireo mpiasa amin’ny faritra voaaro
Vao ny alakamisy teo no nisehoana fitifirana indray tao Bemaraha. Mpiasan’ny Madagascar National Parks (MNP) iray miasa ao amin’ny faritra voaaro no nisy nitifitra teo amin’ny sorony, raha handeha hanatitra ireo vola azo nandritra ny andro na ny “recettes” any amin’ny birao, eo amin’ny 2 kilaometatra miala eo amin’ny faritra voaaro. Vokany: lasa avokoa ny vola rehetra ary tsy nahatsiaro tena ilay mpiasa. Voavonjy moa izy, efa nahazo fitsaboana ary efa tsy misy ahiana intsony ny fahasalamany.[amazon_link asins=’B071771VPS,B076DY3JBP,B00HHT9MPQ,B073TRP3J8′ template=’ProductCarousel’ store=’booknewsmada7-21′ marketplace=’FR’ link_id=’a6b6688c-91aa-11e8-a7bc-592dd50d2f32′]
Saika ho isan-kerinandro dia misy tranga toy izany foana eny amin’ny faritra voaaro, manerana ny Nosy. Ireo mpiasa sy mpiandry ny faritra arovana no tena mijaly amin’izany satria mitebiteby foana izy ireo, tsy mandry andro aman’alina, mba iarovana ny zavaboaary izay vaindohan’draharahan’izy ireo isan’andro.
“Nisy mihitsy aza no voavono noho ireo fanafihana nataon’ny dahalo, hoy i Guy Suzon Andriamangason, talen’ny MNP. Misy ireo miady amin’ny doro tanety sy ny mpihaza tsy ara-dalàna. Misy voatery mandao ny vady aman-janany mihitsy noho izany”.
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana
Araka ny fanazavan’ny filoha lefitry ny MNP, Herijaona Randriamanantenasoa, efa nisy hatrizay ny ady natao tamin’ny tsy fandriampahalemana teny amin’ireny faritra voaaro ireny, saingy hamafisina hatrany izany. Anisan’izany ny fiaraha-miasa amin’ny manam-pahefana eny amin’ny lalam-pirenena, sy ny fiaraha-miasa amin’ny Vondron’olona ifotony eny amin’ny faritra tsirairay eny.
Na dia izany aza, tsy ampy izany ady amin’ny fandriampahalemana izany, ary hita fa manjaka ireo dahalo sy jiolahy, na dia eny aminn’y lalam-pirenena fotsiny aza.
Fankasitrahana ireo mpiasa
Mametraka medaly amin’ireo mpiasan’ny Madagascar National Parks ny ministry ny Tontolo iainana, ny ekolojia sy ny ala.
Ireo mpiasan’ny MNP 58 nahazo fankasitrahana omaly, tany Soavinimerina.
Ho mariky ny fankasitrahana sy fankaherezana ireo mpiasa sy mpiara-miasa aminy, ny MNP dia nanolotra medaly sy mari-pankasitrahana 374 ho azy ireo, manerana ny Nosy. Mpiara-miasa 58 kosa no voasoratra hoe “Chevaliers de l’ordre national”, omaly, teny Soavinimerina, ho fankasitrahana azy ny asa vitan’izy ireo nandritra ny 20 taona teo anivon’io sampan-draharaha misahana ny zava-boaary io. Tsara marihina fa 27 taona izay no nitsanganan’ny MNP.
Nanatrika ny lanonana ny ministry ny Tontolo iainana, ny ekolojia sy ny ala. Nandritra ny kabariny dia notsipihany manokana ny fankasitrahana ireo mpiasan’ny MNP ireo, sy ny ankohonan’izy ireo, izay mitebiteby isan’andro noho ny tsy fandriampahalemana.
Fahazoana ”biosphère” vaovao
Anisan’ny zava-baovao ny fahazoan’i Madagasikara “biosphère” ankehitriny, izay tafiditra anatin’ny faritra voaaro ihany koa. Araka ny fanazavana nentin’ny ministra, ny “biosphère” dia “système” iray izay mampivady ny fiarovana ny tontolo iainana amin’ny asa sahanin’ny tontolo manodidina, mba hisy vola miverina indray ho an’ny vondrona ifotony anohizana ny asa fiarovana.